Dagaalka Isbeddelka Cimilada Tallaabada Waqti
Completed Community Solar Garden oo ka baxsan Garoonka Caalamiga ah ee Denver. (Sawir: SunShare)
Khamiista, magaalada Minnesota Cologne (dadka 1,500) ayaa saxiixay heshiis taas oo ka dhigaysa dawladeena hoose ee ugu horeysa inay tagaan qoraxda. Magaaladani waxay marti gelin doontaa a SunShare beerta qorraxda ee bulshada, taas oo badbaadin doonta $ 40,000 sannadkii iyada oo kor u qaadaysa dhismayaasha magaalooyinka ayna u diraan korantada shabakadda.
D / hoose waxay eegtay hantideeda, waxay aqoonsatay lamaane, waxayna qaadatay talaabo. Tani waa habka aasaasiga ah ee la dagaalanka isbeddelka cimilada.
Afartan mayl dhinaca waqooyi-bari, Machadka McKnight wuxuu isku dayayaa inuu sameeyo wax la mid ah iyada oo loo marayo noo deeq bixinta, laakiin sidoo kale iyada oo loo marayo $ 2,1 bilyan annaga. Sida Cologne, waxaanu eegaynaa hantidayada, aqoonsi la-hawlgalayaasha, iyo in ay tallaabo ka qaadaan jawiga - labadaba weyn iyo yar yar siyaabaha.
Bishii Oktoobar waxaannu ku tallaalnay Istaraatijiyadda Wax-qabadka Carbon Mellon Capital Management oo kor u qaadaya shirkadaha dhuxusha oo ka soo jeeda badeeco ballaadhan oo ay ka mid yihiin miisaan culus oo aan miisaan lahayn, iyada oo ku xidhan isbeddelka isbeddelka cimilada iyada oo la barbardhigayo kuwa ka qaybqaatayaasha. Taasi waxay ahayd wax aad u wanaagsan.
Istaraatijiyadaan maalgashiga waxaa lagu dhisay iyadoo la isticmaalayo xogta gaaska dabaysha (GHG) ayaa si iskaa ah u soo sheegey shirkadaha. Hase yeeshee, dhammaan shirkadaha ma soo sheegaan - taasina waa ay u xun tahay maalgashadayada. Taas oo keentay tallaabo yar.
Bishii Abriil waxaan nahay wuxuu u qoray 170 shirkadood ee qaybaha baahsan ee GHG ee aan sheegin qashinka. Waxaan dooneynay inay ogaadaan in, sida maalgashi, Xarunta McKnight Foundation waxay u baahan tahay xogta cimilada ee wanaagsan ee go'aan qaadashada maalgashiga. Tan waxaa lagu magacaabaa hawlgal maalgaliye - hagaajinta waxa aad leedahay.
Ilaa hadda, waxaan ka soo jawaabnay todobo shirkadood. Qaar ka mid ah warbixinnada mas'uuliyadda shirkadaha ee ay bixiyaan macluumaadka GHG, sida shirkadda shidaalka iyo gaaska Kosmos Energy. Taas bedelkeeda, shirkadda warshadaha samafalka ee xeebaha Cilmi-baaris wuxuu sheegay in sababtoo ah howlgalladeeda aysan u baahnayn qiiqa oggolaanaya ma aragto baahi loo qabo in la soo sheego. Dhab ahaantii? Taasi waa war wanaagsan oo loogu talagalay maalgashadayaasha.
Mashruucan ma abuuri doonaa suuqyo hufan oo dheeraad ah? Xaqiiqdii maaha iskiis. Laakiin macluumaadka ku saabsan istaraatiijiyadaha maalgashigayaga ku shaqeynaya kaarboonka waxay tusaale u noqonaysaa go'aaminta shirkadaha in maalgashadayaasha ay doonayaan in si rasmi ah looga bixiyo isbeddelka cimilada. Waxay muujineysaa in suuqyadeenna maxaabiis ah ay isbeddelayaan.
Iyo, ugu dambeyntii, waxa suuqa uu dalbanayo, suuqyada ayaa hela.
Baro wax badan oo ku saabsan barnaamijka Maalgelinta Saameynta ee McKnight